🥇 ▷ Aukey wuxuu soo bandhigayaa 5 fiilooyin cusub oo caqli gal ah iPhone iyo MacBook ✅
Aukey wuxuu soo bandhigayaa 5 fiilooyin cusub oo caqli gal ah iPhone iyo MacBook
Laba sano ka hor, Apple waxay qaadatay lacag deg deg ah on iPhone, sida ku dallaca bilaa-waayirka, marka inta badan soosaarayaasha Android ay horay u bixiyeen in muddo ah Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay bixinayaan nidaam lacag-ku-diris dhakhso leh, ma aysan dhicin illaa la soo saaro ‘iPhone 11 Pro’ markii korantada la beddelay si looga faa’ideysto.
Labada iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max labadaba waxay isku daraan a 18W qaylo dhaan deg deg ah, go’aan aan horay u lahaa, laakiin kulligeen waan ognahay waxay u egtahay Apple. Haddii aadan qorsheyneynin inaad cusbooneysiiso iPhone-kaaga kala-sooca Pro, waxaad raadineysaa xamaar cusub oo leh dhowr dekedood ama waad lumisay tii aad haysatey, xulashooyinka ay soo bandhigtay Aukey ayaa ah kuwa ugu fiican suuqa.
Iibsashada xarkaha maahan hawl fudud waana inaan waqti kadhignaa, haddii aannan dooneynin inaan nacayb diidno. Aniguna waxaan dhihi karaa xanaaq, maxaa yeelay haddii aan dooranno wax-wadeyaasha Shiinaha, waxay u badan tahay in waqti ka dib, cajiinka iyo aaladdayadu ay joogsan doonaan shaqada.
Sidoo kale, haddii aad rabto ka faa’iidayso ku dallacsiinta iPhone dhaqsaha badan, xulashooyinka ka imanaya bariga ayaa xitaa ka sii khatar badan. Aukey waxay soo bandhigtaa noocyadeena cusub ee xamuulka ah Dyte Detect function, oo ah shaqa u xilsaaran bixinta dhamaan awooda xamuulka ee dekedaha la adeegsanayo.
Shaqada ‘Dynamic Detect’ wuxuu wanaajiyaa qaybinta awoodda dekedaha, si ay korontotu u siiso awood dhan 30W dhammaan dekedaha ay haysato illaa iyo inta aan ku xidhnay hal qalab keliya. Haddii aan isku xirno, laba, awoodda culeyska ayaa loo qeybin doonaa sida lagu aasaasay xamuulka.
Tusaale waxaan si fudud ugu fahmi doonnaa iyaga. Haddii aan haysanno qaanno leh laba dekedood oo wax ku ool ah, USB-C 18W iyo USB-A 12W, xamuulku wuxuu leeyahay awood dhan 30W, laakiin dhab ahaantii waxay bixin kartaa kaliya ugu badnaan 18W, xitaa haddii dekeda la isticmaalayo oo keliya. awood weyn. Iyada oo la adeegsanayo ‘Dynamic Detect’ taasi ma dhicin tan iyo markii koronto-xireyuhu awood u leeyahay inuu meeleeyo dhammaan dekedaha 30W marka hal deked kaliya la adeegsanayo.
Shaqadan cusub ee waxsoosaarka soo saaraha Aukey waxaa laga helaa labadaba 30W iyo 60W xamuulka soo saaraha. Hoos waxaan ku tusineynaa dhamaan dalabyada Wicitaannada Aukey oo leh Dynamic Detect ayaa hadda laga heli karaa suuqa.
Aukey xaraashka caqliga leh ee leh Dynamic Detect
30w xeedho leh firfircoon Detect function, oo leh Laba dekedood wax soo saar: USB-C iyo USB-A. Awood leh 30W waxaan ku dallaci karnaa aalad kasta oo la jaan qaadi karta bixinta degdegga ah waqti yar, ha ahaato iPhone ama taleefanka kale ee la jaan qaada. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa Nintendo Switch iyo MacBook, inkasta oo aysan ahayn ikhtiyaarka ugu fiican. The 3oW charger with Aukey Dynamic Detect wuxuu leeyahay a Qiimaha 30,9 euro.
Haddii gurigeenna aan horay u qaadnay isku xirka USB-C ee aaladda oo dhan, nooca Aukey PA-D2 ayaa laga yaabaa inuu yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee la tixgelin karo. Dallacahan ayaa na siiya a Awood 36W iyada oo loo marayo laba dekedaha USB-C.
Qaabkan ayaa ah la jaan qaada qalab kasta oo la jaan qaadi kara si dhakhso leh, Marka laga soo tago Nintendo Switch iyo MacBook Air, in kasta oo sidii hore oo kale, waqtiga qaadashadu way sii dheeraan doontaa. Isaga Aukey PA-D2 waxaa lagu qiimeeyaa 32.99 euro.
Aukey wuxuu ina siinayaa kartidayaga “PA-D3 charger”, xamuul xamuul ah oo na siiya a Awood 60W iyada oo loo maro laba dekedood: USB-C iyo USB-A. Haddii aan wada isticmaalno labada dekedood, culeyska ayaa loo qeybin doonaa sida soo socota: 45W ee USB-C iyo 15W ee USB-A. Haddii aan isticmaalno kaliya USB-C dejinta deynta, awoodda ay na siin doonto waxay noqon doontaa 60W.
Thanks to 60W ee awoodda, waxaan u isticmaali karnaa si aan ugu dallacno MacBook-ga aan dhib lahayn, wax aan ka dhicin moodalladii hore. Aukey 60W charger waxaa lagu qiimeeyaa 49.99 euro gudaha Amazon.
Isaga Aukey PA-D4 waxay na siisaa hal isku xirka USB-C iyo awood 60W ah, awood fiican ayaa ah maahan kaliya inay ku dallacdo MacBookgaaga, laakiin waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku dallacdo MacBook Pro hab heersare ah, adoo ah beddel aad u fiican oo ah kaarka rasmiga ah ee MacBook-yada na siiya Apple.
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa si aan ugu dallacno iPhone-keena, taleefanka casriga ah ee iswada leh oo leh dallaca deg deg ah, Nintendo Switch… 60W Aukey PA-D4 ayaa lagu qiimeeyaa 34,99 euro gudaha Amazon.
Aukey PA-D5, waa moodelka iskudayaga ugu wanaagsan dhamaan moodooyinka hore maadaama ay nasiineyso a Awood 60W iyada oo loo marayo laba dekedaha USB-C. Haddii aan isticmaalno hal deked oo keliya, awoodda ay bixiso koronto ayaa ugu badan, oo ah 60W. Laakiin si wada jir ayaan u adeegsanaa, awoodda rarka ayaa loo qaybiyey 45 / 15W.
Dalladani waa mid ku habboon ku dallac MacBook / MacBook Pro si joogto ah iyo haddii aan sidoo kale u baahan nahay inaan ku dallacno iPhone, iPad ama taleefanka kale ee kasta ee la jaan qaadaya dalabka degdegga ah. Aukey PA-D5 wuxuu leeyahay culeys 181 garaam iyo cabbir ah 11 × 7.5 × 3.5 mm. Waxay ku leedahay qiime dhan 59.99 euro gudaha Amazon,